म्युजिकल फिल्म ‘आमा कहाँ खोजुँ ?’ को ट्रेलर सार्वजनिक - नेपालबहस
म्युजिकल फिल्म ‘आमा कहाँ खोजुँ ?’ को ट्रेलर सार्वजनिक
| ११:५३:१८ मा प्रकाशित
३ फागुन, काठमाडौं । म्युजिकल फिल्म ‘आमा कहाँ खोजुँ ? को ट्रेलर आइतवार सार्वजनिक गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल युट्युबबाट सार्वजनिक गरिएको म्युजिकल फिल्म ‘आमा कहाँ खोजुँ ? मा नेरिस्का स्थापित, रवि मैनाली, सारिका ढकाल र श्रृष्टि थापा मगरको अभिनय रहेको छ ।
अनाथ अश्राममा रहेकी छोरीले जब बिस्तारै ठुली हुदै जान्छे जन्म दिने आमाको बारेमा सोच्न थाल्छे । उनलाई भेट्न् मन लाग्छ । जस्तो सुकै भए पनि एक चोटी भेट्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहाना बढ्न थाल्छ । आश्रममा कर्म दिने आमा भए पनि उनलाई जन्म दिने आमाको अभाब खट्की राखेको हुुन्छ, फिल्मले कथा बोलेको छ ।
एक दिन अचानक, आफु सानो छदाँ खोलाको किनारमा छोडेर भागेको सपना देख्छे, व्युँझिन्छे । उनलाई अझ बेशी आमाको आवश्यक्ता महशुश गर्छे । आमाको खोजि गर्छे । यसमा छोरीको धारणाबाट, छोरीले कथालाई प्रस्तुत गरेको छ । ‘आमा कहाँ खोजुँ ? नेपाली समाजमा देखिने हजारौ निर्दोष र अबोध अनाथ बालबालिकाहरुको कथा हो ।
आमाको अभावमा हुर्किरहेका बालबालिकाहरुको लुकेका पिडाहरु, बनावटी खुशीहरु, आघातित बाल मनोविज्ञान र जिबनमा आमाको महत्वलाई प्रकाश पार्न खोजिएको छ । हजारै शिशु अनाथ हुनुमा एउटी आमा भन्दा हाम्रो समाज दोषी पो हो कि ? अपराधी हो कि ?
राज्यको नीतिले एकल पहिलामा कानुन असहज हुनुको पछाडी केही हद सम्म राज्य पनि दोषी हो कि ?
भन्ने प्रश्न फिल्मले पैदा गर्छ । फिल्ममा अशोक थापा मगरको संगीत र शब्द रहेको छ । फिल्मको गीतलाई गिताञ्जली थापा मगरले गाएकी छन् । संगीतमा राजु थापा मगर पनि आवद्ध छन् । दीपक बज्राचार्यले खिचेको फिल्मलाई अशोक थापा मगरले नै निर्देशन गरेका छन् । फिल्मका निर्माता टेक बहादुर थापा र राजु थापा हुन् ।
चलचित्र ‘आमा’ युट्युबमा रिलिज ४ हप्ता पहिले
अन्जुको आमामा मिथिला र सुरक्षाको जीवन्त अभिनय ५ महिना पहिले
झापामा आमाको हत्या गरेको आरोपमा छोरा पक्राउ ५ महिना पहिले
बञ्चरो प्रहार गरी छोराद्वारा आमाको हत्या ५ महिना पहिले
‘टिकटक क्विन : सुपरम्यान’ बोलको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक ( भिडियो ) भर्खरै
अष्ट्रेलियामा फेसबुक र गुगलले समाचारका लागि रकम तिर्नुपर्ने ३ मिनेट पहिले
शिवरात्रिको अवसरमा ताण्डव नृत्य प्रतियोगिता ७ मिनेट पहिले
म्याद सकिएको सामग्री बिक्री आरोपमा व्यापारीलाई जरिवाना १३ मिनेट पहिले
स्रोत नखुलेको २५ लाखसहित दुईजना भारतीय नागरिक पक्राउ १४ मिनेट पहिले
देवघाट क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष अधिकारीद्वारा पदभार ग्रहण २२ मिनेट पहिले
व्यावसायिक कृषिमा रम्दै पोखरेल ३० मिनेट पहिले
ओलीका लागि दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश आवश्यकता कि बाध्यता ? ३२ मिनेट पहिले
खुमलटारमा प्रचण्ड वामदेवको भेटर्वाता ३४ मिनेट पहिले
मापदण्डविपरीत व्यवसायीले बगर उत्खनन गर्दै ४६ मिनेट पहिले
म्याग्दीका ग्रामीण सडकमा कालोपत्रे शुरु ५५ मिनेट पहिले
नवनियुक्त राजदूत रेग्मी र चेम्वर पदाधिकारीहरु बीच आर्थिक अभिवृद्धि बारे छलफल ५९ मिनेट पहिले
आर्थिक अभावले डडेल्धुरा सेमी कभर्ड हल अलपत्र १ घण्टा पहिले
शिक्षकले तलब नपाउँदा विद्यालयमा तालाबन्दी, पठनपाठन प्रभावित १ घण्टा पहिले
काेराेना विरुद्धको खोप लगाउनेकाे संख्या ४ हजार ५ सय नाग्यो २२ घण्टा पहिले
एभरेष्ट बैंकको ८८ लाख संस्थापक शेयर सर्वसाधारण शेयरमा परिणत २० घण्टा पहिले
बुढानिलकण्ठमा कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बस्दै २१ घण्टा पहिले
श्रोत नखुलेको २५ लाखसहित २ जना पक्राउ २२ घण्टा पहिले
कांग्रेसकाे समर्थन जसलाई हुन्छ, उसैकाे सरकार बन्ने देखियाे २३ घण्टा पहिले
चीनमा नयाँ फैसला, पूर्व पत्नीलाई घरायासी काम गरेबापत क्षतिपूर्ति दिन आदेश २१ घण्टा पहिले
प्रदेश नं. २ का प्रदेश प्रमुख तिलक परियार पदमुक्त ६ दिन पहिले
विपद् सम्बन्धि जानकारीका लागि पोर्टल स्थापना २ दिन पहिले
नर्भिक अस्पतालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ओपीडी संचालन ४ दिन पहिले
कोभिडविरुद्धको खोप घाना पुग्यो २२ घण्टा पहिले
फ्रान्सेली विदेशमन्त्री ड्रायनले जर्मन र बेलायती समकक्षीसँग भेट्दै ७ दिन पहिले
सारथी नेपाल लघुवित्तले गर्यो शेयरधनीलाई लाभांश घोषणा, बोनस कति ? १ दिन पहिले
अपाङ्गता भएकाको लागि ह्विलचेयर वितरण २ दिन पहिले
चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूद्धारा लिखित जवाफ पेश १ हप्ता पहिले
मिडियालाई सरकार र राजनीतिक दलको सहयोग आवश्यक : थापा १ हप्ता पहिले
मिर्मिरे लघुवित्तको १२ प्रतिशत बोनस प्रस्ताव ३ महिना पहिले
अष्ट्रेलियाद्वारा अध्यागमन नीतिमा यसरी भयो परिवर्तन २ वर्ष पहिले
सुनको जलहरि लगाउन रकम अपुग भएकाले ३० करोड दिन लागिएको हो : संस्कृतिमन्त्री ३ हप्ता पहिले
राष्ट्रपति ट्रम्प समर्थित जुलुसमा हिंसा, २३ जना पक्राउ २ महिना पहिले